Cali Guray Oo Ka Hadlay Wakhtigii M/Siilaanyo Isugu Dambaysay, Xidhiidhkooda Hadda Iyo Haddiiba Loo Cimaamado Xil Wasiirnimo Wuxuu Ka Yeeli Lahaa | FooreNews
Home wararka Cali Guray Oo Ka Hadlay Wakhtigii M/Siilaanyo Isugu Dambaysay, Xidhiidhkooda Hadda Iyo Haddiiba Loo Cimaamado Xil Wasiirnimo Wuxuu Ka Yeeli Lahaa
Cali Guray Oo Ka Hadlay Wakhtigii M/Siilaanyo Isugu Dambaysay, Xidhiidhkooda Hadda Iyo Haddiiba Loo Cimaamado Xil Wasiirnimo Wuxuu Ka Yeeli Lahaa
Hargeysa (Foore)- Guddoomiye ku xigeenka Saddexaad ee xisbiga Mucaaridka ah ee UCID Eng. Cali Maxamed Yuusuf (Cali Guray) ayaa markii ugu horraysay si faahfaahsan uga hadlay xidhiidhka shakhsi ee sida gaarka ah uga dhaxeeya Madaxweyne Siilaanyo, Haddii uu qaadan lahaa Xil Madaxweynuhu ugu yeedhi Cali ahaan iyo arrimo kale oo ay ka mid yihiin doodda saluuga Saamiga Xildhibaanada isaga oo Cali ku dooday in aanu qabin doodda Gobolada Galbeedku (Hargeysa, Gabiley iyo Awdal) mar walba ku doodaan ee ah in aanay Bari dad kaa xigin ee dhul kaa xigo.
Cali Maxamed Yuusuf waxa uu dhammaan arrimahaasi kaga hadlay waraysi xiiso badan oo uu siiyey shabakadda Hadhwanaagnews.com, waxaanan waraysigaasi oo dheeraa ka soo qaadan doonaa qodobaddan dhawrka ah:
Ugu Horrayn Cali Maxamed Yuusuf (Cali Guray) oo ka hadlaya saluuga xildhibaanada Awdal ka muujiyeen saamiga Kuraasta gobolaha Wakiiladu waxa uu yidhi sidan: “Siyaasad ahaan waa xaalad aad u adag oo xasaasi ah saami qaybsiga beelaha ee Golaha Wakiiladu tiro ahaan. Ma qaadan karro qaababka Ingiriiska iyo Maraykanka ee odhanaya in cidda ugu badani ugu badsato golaha Wakiilada oo dhaqankeena ayaan taasi innoo saamaxayn. Waxaanse qabaa anuu in dhibaatada maanta la soo faqay ee arrinkaasi ka taagan ay tahay ujeeddo la doonayo in aanay doorasho ku dhicin. Marka la yidhaa xeerkii hore aannu ugu galnay doorashada yeeli mayno oo nooma cuntamo mid cusubna aan lahayn oo aan la diyaarsan, taasi miyaanay ahayn doorasho dhici mayso iyo kicin dadweyne”.
Cali Maxamed Yuusuf (Cali Guray) oo arrinkaasi ka sii hadlayaa waxa uu yidhi: “Arrinta doodad ka taagan tirada Xildhibaanada iyo sida golobadu saami ugu kala yeelanayaan. Waxa jirta haddii aynu xaggan galbeed nahay in aynu nidhaa Bari dhul mooyee dad kaama xigo oo macnaheedu yahay Somaliland khariidadeeda marka la eego in afar meelood oo saddex dhulka Somaliland bari u badan yahay balse waxaan qabaa anuu in aanay doodda odhanaysa galbeedbaa badan aanay jirin. Maqaal aan maalin dhawayd qoray baan ku sheegay oo goboladan galbeedku waxay aaminsan yihiin in bari dhul mooyee aanu dad kaa xigin. Iyaga ayuunbaa isu sheegay. Dhinac waa runtood oo dhulka Somaliland marka afar loo qaybiyo saddex baa bari ah. Laakiin xagga dadka (Population-ka) kee badan. Haddii aynu innaga oo reer Galbeed ahi imtixaan iska qaadno oo nidhaa innagaa reer Bari ka badan siday noqonaysaa? Anuu waxaan caddeeyey in aanaynaan ka badnayn”. “Doorashadii Wakiilada sibaa loo qaybiyey. Gobolada Galbeedka degmooyinkiisa oo dhan waa laga codeeyey. Waxaana la siiyey 43 Xildhibaan. Gobolka Saaxil waxa la siiyey 10 xildhibaan. Gobolka Hargeysa waxa la siiyey 20 Xildhibaan, Gobolka Awdal waxa la siiyey 13 Xidhibaan. Waxa haddaba is waydiin leh yaa cad ka maqan yahay. Galbeedku ha is xisaabiyo oo yaa cad ku maqan yahay aan uga soo qaadnee?”.
Su’aal Cali Guray Laga Waydiiyey Xidhiihka ka dhaxeeya isaga iyo Madaxweynaha shakhsi ahaan gaar ahaan Intii Madaxweyne Siilaanyo talada dalka qabtay marna kulan gaar ahi in uu dhex maray iyo in kale maadaama ay hore isugu dhawaayeen muddo dheerna soo wada shaqeeyeen, ayaa waxa uu Cali Guray ku jawaabay sidan:
“Sannad ama Sannad iyo badhkii ugu horreeyey, Salaan baan Madaxweynaha ugu tagi jiray, waan soo salaami jiray. Axmed Siilaanyo anigaa laba goor ka tagay ee isagu marna igama tagin. KULMIYE annaga oo ah aniga ayaa isaga tagay. Muddo laba jeer ay ahuu istaqaaladdayda iga jeexjeexay oo iga diiday oo yidhi iga tagi maysid. Isaga oo Madaxweyne noqday oo ugu yaraan aan soo salaamo oo aannu sheekaysano oo guriga ugu tago ama Xafiiska ugu tago, taana isagu muu diidin ee anaa joojiyey oo isaga tagay. Anugu markaa Axmed ka caban maayoo ninka ka tagay waa aniga. Waxaanad ogaataa tu shakhsi ugamaan tagin ee waxaan uga tagay uun dan caam ah oo la wada leeyahay. Laakiin Xidhiidhkayaga shakhsiga ahi waa mid wanaagsan. Kolay isna ima necba anna ma necbi”.
Mar kale Cali Guray oo wax laga waydiiyey in Inta badan uu dhaliilo xukuumadda Madaxweyne Siilaanyo balse aan loo jawaabin, waxa uu arinkaasi ku macnayn lahaa ayaa waxa uu ku jawaabay sidan:
“Ninyow horta qaarkood waxay yidhaahdaan Madaxweynaha ayaa noo diidday in aannu kuu jawaabno oo yidhi ninkaa ha u jawaabina. Aniguna midbaan aaminsanahay oo ah in waxa aan ku dhaliilo ee aan sheegaa tahay wax run ah uun”.
Cali Guray oo wax laga waydiiyey Haddii Madaxweyne siilaanyo mudadaa xukuumaddiisa ka hadhay uu xil wasiirnimo ugu yeedho in uu qaadan lahaa iyo kale ayaa ku jawaabay sidan: “Maya, (Qosol Gaaban), Maya!!!, Maan qaateen Laakiin annaga xidhiidhkayagu Xil Wasiirnimo iyo lacag iyo wax caynkaas ah kuma xidhna” ayuu hadalkiisa ku soo gunaanaday Cali Guray.
Previous PostMa Filayo In Maxkamadda Sare Soo Saarayso Go’aan Khilaafsan Kii Guurtida”…Xaaji C. Waraabe Next PostAkhri Jaaliyadda Gobolka Ohio Ee Waddanka Maraykanka Oo Shahaado Ku Maamuustay Wasiirka Duulista Hawada Somaliland